VAIA5000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 5000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA5000
An effective solution that keeps people with pure water to use. 5000LPH VAIA5000 Purified Water Filtration System is produced by the most modern technology of the United States, using RO membrane to filter water, giving usersasource of pure water meeting QCVN 6-1:2010/BYT standards of the Ministry of Health. Practical, US FDA standard.
ရေသန့်ကို အသုံးပြုဖို့ ထိရောက်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်တဲ့ 5000LPH VAIA5000 ရေစစ်ကို RO ရေစစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး US ရဲ့ နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီသလို US ရဲ့ FDA စံနှုန်းနဲ့လည်း ညီပါတယ်။
Collective image of Viet An company Viet An ကုမ္ပဏီရဲ့ အဖွဲ့လိုက်ပုံ
Do not skip this article if you are looking foraproduct that specializes in high capacity purified water filtration, withalong service life and above all, the reasonable price.
တကယ်လို့ သင်က လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်ပြီး ကြာရှည်ခံကာ ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာတဲ့ ပစ္စည်းကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ။
5000LPH VAIA5000 Purified Water Filtration System corresponds toacapacity of 5,000 liters of pure water per hour that the system can filter from different water sources. Products are imported and distributed directly by Viet An General Trading Joint Stock Company in Vietnam and exported to ASEAN countries.
5000LPH VAIA5000 ရေစစ်က တစ်နာရီမှာ ၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ရေအရင်းအမြစ် အမျိုးမျိုးကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် တင်သွင်းဖြန့်ချီပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ပါတယ်။
In recent times, the Model VAIA5000 has been chosen by many domestic and foreign customers to use for water purification in homes, schools, hospitals, shopping malls, apartments, and manufacturing facilities. .. and always receive positive feedback from customers.
VAIA5000 မော်ဒယ်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဝယ်ယူသူတွေက အိမ်၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ရှော့ပင်းမောလ်၊ တိုက်ခန်းတွေ၊ ထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာ သုံးဖို့ ရွေးချယ်ကြပြီး ကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တွေလည်း ရရှိထားပါတယ်။
Do you want to know more details about this product line of industrial purified water purification with capacity of 5000 liters / hour? Let's find out through the content below.
တကယ်လို့ သင်က တစ်နာရီမှာ ၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရေစစ်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပေးပါ။
5000LPH VAIA5000 Purified Water Filtration System
5000LPH VAIA5000 ရေစစ်စနစ်
With 5000LPH VAIA5000 Purified Water Filtration System will be suitable for many uses such as serving purified water for homes, schools, hospitals, restaurants, hotels, apartments, factories, factories. , production and business establishments of bottled water, purified bottles ... With water filter column made of high-grade 304 stainless steel material with high durability, absolute safety and hygiene. The automatic valve system helps the water purification process take place completely closed, automatically, stabilizes the sweetness of the water and ensures the water quality always meets the standard of QCVN 6-1:2010/BYT of the Ministry of Health. VAIA5000 isaproduct manufactured and monitored according to ISO 9001:2015 standards, qualified for export.
5000LPH VAIA5000 ရေစစ်က အိမ်၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ တိုက်ခန်း၊ စက်ရုံ၊ ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်း စသဖြင့် နေရာမျိုးစုံတွင် အသုံးတည့်ပါတယ်။ ကြာရှည်ခံပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ 304 စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် လုံခြုံပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။ အော်တိုအဆို့စနစ်က ရေသန့်လုပ်ငန်းကို အပြည့်အဝ အော်တိုလုပ်ဆောင်စေပြီး ရေကို ပိုးသတ်ပေးကာ ရေရဲ့ ကွာလတီကို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် VAIA5000 ကို ISO 9001:2015 နဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် တင်ပို့ဖို့အတွက် အရည်အသွေးပြည့်မီပါတယ်။
Filter material system, filter column, membrane filter, pump system ... are imported from advanced countries such as the US, UK, Italya, Japan ... with long-term use.
With this 5000LPH VAIA5000 Purified Water Filtration System, you will always be proactive in the quality of the pure water you use, protect your health and also createagreat source of profits for your business.
ရေစစ်စနစ်၊ ရေစစ်ကော်လံ၊ ရေစစ်အလွှာပါး၊ ရေစုပ်စက်တွေကို US UK အီတလီ ဂျပန်စတဲ့ ခေတ်မီနိုင်ငံများမှ တင်ပို့ထားတာကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံပါတယ်။ 5000LPH VAIA5000 ရေစစ်နဲ့ဆိုရင် သင်အသုံးပြုတဲ့ ရေရဲ့ ကွာလတီကို သေချာစေပြီး ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင့်စီးပွါးရေးကို အကျိုးအမြတ်တွေ ရစေပါတယ်။
The leading purified water filter uses of 5000LPH VAIA5000 Purified Water Filtration System
ဦးဆောင်နေသော 5000LPH VAIA5000 ရေစစ်
Completely remove lead from the water
ရေမှ ခဲသတ္တုကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးပါသည်
There are many causes of lead-contaminated water, but these can be mentioned as deteriorating, rusted, and corroded water piping systems, which will disperse lead ions into the water. . Through eating and drinking we have invisibly loaded ourselves withacertain amount of lead. Overalong period of using lead-contaminated water, you may experience loss of memory and anemia. Lead is also considered to cause lung, stomach and glial tumors.
သံချေးတက်တဲ့ ရေပိုက်စနစ်ကြောင့် ရေထဲမှာ ခဲသတ္တုတွေ ပျော်ဝင်နေတတ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒီရေတွေကို စားသောက်မိတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ကို ကျွန်တော်တို့ ခဲပမာဏများအောင် ပြုလုပ်နေမိပါတယ်။ ခဲပါဝင်တဲ့ ရေတွေကို သောက်သုံးမိရင် မှတ်ဥာဏ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ သွေးအားနည်းခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆုတ်၊ အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
In addition, lead is also harmful to human fertility, pregnant women using lead-contaminated water can lead to miscarriage. So how to remove lead from water? Many people think that boiling water to drink will remove lead from the water, please affirm that you will not be able to remove lead by boiling ordinary water. But do not worry when you own an industrial water filtration system using RO water filtration technology. Because the method usesatechnical membrane combined with pump pressure and reverse osmosis technology to remove impurities and separate ions dissolved in water to remove 99% of compounds and bacteria. . This is also the method that is popularly used because of its economy and efficiency.
ဒါ့အပြင် ခဲက မျိုးပွါးမှုကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်သည်တွေက ခဲပါတဲ့ ရေကို သောက်မိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ရေထဲမှ ခဲကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။ ရေကိုဆူပွက်အောင် ကျိုချက်သောက်မယ်ဆိုရင် ခဲတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ထင်ပေမယ့် တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် RO ရေစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းက စုပ်တင်ခြင်းနဲ့ ပြောင်းပြန် အိုစမိုးစစ် နည်းပညာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ နည်းပညာ အလွှာပါးကို အသုံးပြုပြီး ရေထဲမှ အညစ်အကြေး အိုင်ယွန် ဘက်တီးရီးယားတွေကို ၉၉%အထိ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
RO membrane is designed with tight pore structure, the filter pore size is much smaller than UF membrane and other filters. Therefore, RO membrane is capable of removing all particles, bacteria, lead and heavy metals, organic matter including particles with the size of 0.1 - 0.5 nanometers.
RO အလွှာပါးကို တင်းကြပ်သော အပေါက် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ရေစစ်အပေါက်က UF အလွှာပါးနဲ့ အခြားရေစစ်တွေထက် အရွယ်အစား ပိုသေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် RO အလွှာပါးက ၀.၁-၀.၅ နာနိုမီတာ အရွယ်အစားရှိတဲ့ အမှုန်အပါအဝင် ဘက်တီးရီးယား၊ ခဲ၊ ကြီးမားသော သတ္တု၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
Completely remove arsenic from water
ရေမှ အဆိပ်ကို အပြည့်အဝ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်
Concentration of arsenic in excess of the allowable level in domestic water, well water, and groundwater isafactor that weakens our body's immune system, making us susceptible to flu, diarrhea, malaria, and fever. hemorrhage, bacillus cup, mumps, amoebic dysentery, viral hepatitis, chicken pox ... When using arsenic-contaminated water, people can get cancer, including skin cancer. In addition, arsenic poisoning the circulatory system when drinking water with arsenic content of 0.1 mg / l. Therefore, it is necessary to treat arsenic contaminated water before using it for daily life and eating.
တွင်းရေ၊ မြေအောက်ရေတွေမှာ အဆိပ်တွေ ပျော်ဝင်နေတာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားနည်းစေပြီး တုပ်ကွေး၊ ဝမ်းလျှော၊ ငှက်ဖျား၊ ဖျားနာ၊ လိပ်ခေါင်း၊ ဗက်တီးရီးယားပိုး၊ ပါးချိတ်ရောင်၊ ဝမ်းကိုက်၊ အသဲရောင်၊ ရေကျောက်စတဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုရေမျိုးကို သောက်သုံးမိရင် အရေပြားကင်ဆာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်လီတာမှာ အဆိပ် ၀.၁ မီလီဂရမ် ပါရင်တောင် သွေးလည်ပတ်မှု စနစ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုရေမျိုးကို နေ့စဉ်စားသောက်ဖို့ ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
With the filter eye size smaller than the size of bacteria, so the RO filter will help you completely remove arsenic and other metals from the water, you will haveasafe water source that does not contain arsenic for living. , Eating.
ရေစစ်ရဲ့ အရွယ်အစားက ဘက်တီးရီးယားထက် သေးတဲ့အတွက် RO ရေစစ်က ရေထဲမှ အဆိပ်နဲ့ အခြားသတ္တုတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အဆိပ်မပါတဲ့ ရေသန့်ကို စားသောက်ဖို့ ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်။
Eliminate sodium in water
ရေထဲမှ ဆိုဒီယမ်ကို ဖယ်ရှားပေးတယ်
The ro system has been designed to turn seawater into drinking water for the US Navy, and is being replicated to serve islands, which are severely salty. This isasolution to help improve the freshwater shortage in the island waters and therefore the ro water filtration system is always chosen by the people living on the island.
RO ရေစစ်ကို US ရဲ့ ရေတပ်အတွက် ဆားများစွာပါဝင်တဲ့ ပင်လယ်ရေကို ရေသန့်သို့ ပြောင်းနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ကျွန်းမှ ရေတွေကို ရေသန့်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာကြောင့် ကျွန်းမှ လူများကလည်း ဝယ်ယူကြပါတယ်။
How does the 5000LPH VAIA5000 Purified Water Filtration System taste?
5000LPH VAIA5000 ရေစစ်က ဘယ်လိုအရသာ ရှိလဲ
When water is treated throughafilter system using RO technology, up to 99.9% of impurities, toxins, colors, odors, etc. are removed from the water. Water will taste like pure, gentle and easy to drink water. When using this pure water source, you will haveahealthy body, prevent diseases.
RO ရေစစ်ကို အသုံးပြုပြီး ရေကို ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် ရေမှ ၉၉.၉%သော အညစ်အကြေးများ၊ အဆိပ်အတောက်များ၊ အရောင်များ၊ အနံ့အသက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေက သန့်စင်ပြီး နူးညံ့ကာ သောက်သုံးဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီရေသန့်ကို သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ်7unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ7unit VA/ USApec
18 RO membrane ROအလွှာပါ3းunit Hitech-USA/CSM Korea
Hỏi đáp & đánh giá 5000LPH VAIA5000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်